နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း – Sport Gaber
နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းပြီး အသက်ရှူုမဝ၍ ဆရာဝန်နှင့်ပြ၊ဆေးများသောက်သော်လည်း သက်သာလှသည် မဟုတ်ပါ။နုလုံး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးနှင့်ပြကြည့်ရာ ခွဲစိတ်ဖို့အကြံပေးပြီး ရက်ချိန်းပေးထားသည် ဆိုပါသည်။ထိုသူငယ်ချင်းကံကောင်းသည်ဟုဆိုရပေလိမ့်မည်။
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှဆေးနည်းကောင်းလေးတစ်ခုရ၍ခွဲစိတ်ချင်သောစိတ်ဆန္ဒလည်းမရှိသောကြောင့်ထိုဆေးနည်းလေးအားအားကိုးအားထား ကာဆေးညွှန်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။သူငယ်ချင်းအားလည်းမခွဲစိတ်စေချင်ပါအကြောင်းကားခွဲစိတ်မည်ဆိုပါကသိန်း(၁၀)အထက်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၏လစာအခြေအနေနှင့် လုံးဝမလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။သူငယ်ချင်းဆုတောင်း ပြည့်ပါသည်။
ခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ သိသိသာသာသက်သာသွား၍ဖြစ်လေသည်။ထိုဆေးနည်းမှာ….(၁)ချင်းစိမ်းသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည် ပန်းကန် (၁)ခွက်၊(၂)ကြက်သွန်ဖြူသတ္တုရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၃)ရှောက်ရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်၊(၄)ပန်းသီးရှာလကာရည်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်(၁)ခွက်။ထို(၄)ခွက်အားဆတူရော၍ (၃)ခွက်လျှင် (၂)ခွက်ကျန်အောင် ကျိုရပါမည်။ချင်းစိမ်းထို(၃)ခွက်(၂)ခွက်စာကျန်ပါကပျားရည်စစ်စစ်လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး(၃)ခွက်နှင့်နနွင်းမှုန့်ကွမ်းသီးလုံး(၁)လုံးစာမျှထည့်မွှေပြီးတစ်ညအိပ်နှပ်ထားရပါမည်။
နှလုံး သှေးကွောကဉြျးပွီး အသကျရှူုမဝ၍ ဆရာဝနျနှင့ျပွ၊ဆေးမြားသောကျသောျလညျး သကျသာလှသညျ မဟုတျပါ။နုလုံး အထူးကုဆရာဝနျကွီးနှင့ျပွကွည့ျရာ ခှဲစိတျဖို့အကွံပေးပွီး ရကျခြိနျးပေးထားသညျ ဆိုပါသညျ။ထိုသူငယျခငြျးကံကောငျးသညျဟုဆိုရပလေိမ့ျမညျ။
ဖေ့ဘုတျပေါျမှဆေးနညျးကောငျးလေးတဈခုရ၍ခှဲစိတျခငြျသောစိတျဆန်ဒလညျးမရှိသောကွောင့ျထိုဆေးနညျးလေးအားအားကိုးအားထား ကာဆေးညှှနျးအတိုငျးဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။သူငယျခငြျးအားလညျးမခှဲစိတျစခေငြျပါအကွောငျးကားခှဲစိတျမညျဆိုပါကသိနျး(၁၀)အထကျသာကုနျကမြညျဖွဈပွီးဝနျထမျးတဈယောကျ၏လစာအခွအေနနှေင့ျ လုံးဝမလှယျကူသောကွောင့ျဖွဈလသေညျ။သူငယျခငြျးဆုတောငျး ပွည့ျပါသညျ။
ခှဲစိတျစရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသှေးကွောကဉြျးရောဂါ သိသိသာသာသကျသာသှား၍ဖွဈလသေညျ။ထိုဆေးနညျးမှာ….(၁)ခငြျးစိမျးသတ်တုရညျလကျဖကျရညျ ပနျးကနျ (၁)ခှကျ၊(၂)ကွကျသှနျဖွူသတ်တုရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၃)ရှောကျရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၄)ပနျးသီးရှာလကာရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ။ထို(၄)ခှကျအားဆတူရော၍ (၃)ခှကျလြှငျ (၂)ခှကျကနြျအောငျ ကြိုရပါမညျ။ခငြျးစိမျးထို(၃)ခှကျ(၂)ခှကျစာကနြျပါကပြားရညျစဈစဈလကျဖကျရညျပနျးကနျလုံး(၃)ခှကျနှင့ျနနှငျးမှုန့ျကှမျးသီးလုံး(၁)လုံးစာမြှထည့ျမှှပွေီးတဈညအိပျနှပျထားရပါမညျ။